धनलाभ र सुन्दर श्रीमती पाउन यस्तो गर्नुहोस् !  BRTNepal
धनलाभ र सुन्दर श्रीमती पाउन यस्तो गर्नुहोस् !
बिआरटीनेपाल २०७५ पुष १६ गते ८:५८ मा प्रकाशित
कहिलेकाहीँ सामान्य लाग्ने वस्तुले तपाइको जीवनमा ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ । मानव स्वभाव पनि हो हामी चाँडै केही चिजलाई विश्वास गर्छौ र उत्तिकैमा बिर्सिन्छौँ । तन्त्रशास्त्रमा भनिएको छ अलैँची हाम्रो जीवनमा महत्वपूर्ण वस्तु बनेको छ । हामी त्यसलाई स्वादको रुपमा मात्रै लिन्छौँ तर यसको अन्य धेरै फाईदा छ । हामीले सामान्य व्यवहारलाई मात्रै परिवर्तन गर्ने हो भने धनलाभका निम्ति सहज हुन्छ ।
तपाई मात्रै होईन धनलाभ गर्नका निम्ति सिंगो जगत लागेको छ र कोही सन्तुष्ट पनि छैनन् । हामी सिमित मान्छे भेट्छौ सन्तुष्ट भएका । तपाई धनलाभ गर्न चहानुहुन्छ भने आफ्नो पर्समा जहिलेपनि पाँच अलैँची राख्नुहोस् । यदि तपाई राम्रो श्रीमती चाहानुहुन्छ भने बिहिबार पाँच अलैँचीको दानासहित पहेँलो वस्त्रका साथ गरिबको दान गर्नुहोस् ।
तपाईले धेरै मेहनत गरेपनि प्रतिफल नमिलेको खण्डमा सधैँको राती हरियो कपडामा बाँधेर सिरानीको मुनि राखेर सुत्नुहोस्, र भोलिपल्ट बाहिरको कुनै व्यक्तिलाई दिनुहोस् । यसले तपाईलाई राम्रो गर्नेछ । पढाईमा राम्रो नम्बर चाहिएको छ भने अलैँचीलाई दुधमा हालेर कुनै व्यक्तिलाई खान दिनुहोस् । यी यावत् बिषयमा तपाईले दख्खल राख्नुभयो भने जीवन सुखमयी हुनेछ ।